Kabaha quruxda badan iyo lugaha quruxda badan waxay u baahan yihiin qalabka dahabka ah ee cagaha
Anklets waa inaysan noqonin kuwa qaada
Sawirada dharka lagu xidho sida dahabka loogu talagalay cagaha
Marka heerkulka kulaylku uu kugula taliyo kabaha quruxda badan sida dharka xulashada cagahaaga lafaha, markaa waa isku mid sannad walba: cagahaaga tusi! Iyo waxaan ku siin talooyin loogu talagalay dahabka khudradda cagaha.
Gaadiidka cagaha - cagaha si fiican u jilicsan sida dahabka dahabka
Qofkasta oo hadda farta ku fiiqi kara faraha caanaha iyo farsamooyinka cagajuglaha ah wuxuu ku yimaadaa ciriiriga jilicsan oo jilicsan, wuxuu si cad u yahay faa'iido. Labada jimicsi iyo jimicsi labadaba
Hase yeeshee, isbedelka xayawaanka heer-beereedka ah macnaheedu maahan mid aan loo dulqaadan karin cagaha isboortiga iyo cirifka leh cirifka ciddiyaha ama caleenta Manitu.
Waayo, wixii gacmihiisu wanaagsan yihiin, waa caqli badan tahay, Waa lagu qurxoonaa!
Laakiin sidee ayay udubdhexaadintu u noqon kartaa cagaha? Maxay tahay in la dhegeysto isbeddellada xagaaga ee quruxda badan?
Baro dhalaalaya qorraxda qorraxdu waxay keenaysaa dareen ah astaanta calaamadaha. Silsiladda ayaa si aan caadi aheyn u dulqaata anqawga, waxayna isha ku haysaa indho-indheynaha.
Haddii wadada isbeddelka aan la isku haleynin saameyn kuma yeelan, Eva-ku-galbeed waxay samaysay wax kasta oo sax ah. Si kastaba ha noqotee, bilawga bilawga bilawga ah ayaanan tixgelineynin in wareegga anqawga canqawga uu aad ugu dhow yahay xiisadda.
Wareeji sida dahab ah cagaha
Taasi way fududahay in la arko: haddii aad suulka kor u qaadayso ilaa intii suurtogal ah, canqowga ayaa qaadata inta ugu badan. Haddii aad cageyneyso mar kale, waxaad dareentaa faraqa cad.
Waxay soo socotaa: Qeybta laga yaabo in aan la gooyin xitaa haddii cagtu ay aad u kacsan tahay. Tani waxay sidoo kale tilmaameysaa in dhererka qajaarada ay tahay in lagu go'aamiyo wareegga anqawga ee kiis ba'an. Haddii kale, qalabku wuxuu si deg deg ah u noqon doonaa cabsi.
Suulasha caan ah ayaa waxay leeyihiin madadaalo xiiso leh oo lagu ciyaaro sida farsamooyinka macquulka ah. Laakiin waxay dalbanayaan waxyaabo kale oo ku saabsan dahabka, sababtoo ah xaaladaha anatomical ma ahan kuwa la barbardhigo heerarka oo dhan.
Sababtaas awgeed, siddeedaadna tikidhada gawaarida leh ee gawaarida gebi ahaanba waa caqligal ah. Intaa waxaa dheer, daryeelka waa in la qaataa si loo hubiyo in naqshadda lugta fareemuhu aysan lahayn dhinacyo fara badan iyo dhibco, ama gargaar balaadhan. Sababtoo ah waxaa halkan ku jira qadar macquul ah oo macquul ah oo laga fogaan karo.
Maadada cagaha aan cageynin oo kaliyana kelidii xagaaga? Dhibaato ma leh shaati aan lahayn joogto ah. Mar labaad, halkan waa gacmaha godfather. Yaa xiiseynaya qaabkan quruxda cagta ah waa inuu google ka dhigaa Mehndi. Sababtoo ah Henna waxay leedahay aagga lugta lafteeda!
Cagaha quruxda badan, dahab-shakhsi ahaanba waa had iyo jeer wanaagsan inuu wajaho. Muhiim maaha haddii la sameeyo dahab, dahab ama khudaarta cagaaran. Had iyo jeer waa wax socda.
Cusbooneysiin - fikradaha guriga
Talooyinka jimicsiga ee qoyska
Custo daboolka loogu talagalay xisbiga beerta
Samee dhiirigelinta ilmanimada hore
Wedding - Qorsheynta ee nidaamka taariikh ahaan
Sidee baa xadhiguhu u galaan daawada ilkaha? carruurta su'aal